Ndị na-ebunye Earmuff & Insole na orylọ Ọrụ - China Earmuff & Insole Manufacturers
Oge gboo atụrụ na-akpacha ajị anụ ntị
Ejiri ezigbo akpụkpọ anụ atụrụ mee, akpụkpọ anụ akpụkpọ anụ atụrụ na-ekpo ọkụ ma na-eku ume. Ajị ajị atụrụ na-adị nro ma sie ike. Ezubere nke ọma ma mepụta ya, nke kachasị mma maka ọrụ n'èzí n'oge oyi ● Nkeji edemede no: EF-001 ● 100% atụrụ Shearling na suede ool Ajị anụ ogologo: 1.6cm ● Agba: nwa, chestnut.coffe, isi awọ na agba ndị ọzọ ● Ọ na-ekpo ọkụ ma na-achụ mmiri mmiri ● Ejiji ejiji na oke mma, Nke ndị
ezigbo atụrụ na-akpacha ajị anụ ntị
Mere nke kasị mma ọkwa ezigbo suede zuru dara oké ọnụ atụrụ shearling.suede akpụkpọ anụ bụ ma na-ekpo ọkụ na ume. Ajị ajị atụrụ na-adị nro ma sie ike. Emepụtara ya ma depụta ya nke ọma, nke kachasị mma maka ọrụ n'èzí n'oge oyi ● Nkeji edemede ọ bụla: EF-002 ● Njirimara nkọwa abụọ dị mkpa ● Ezigbo suede n'èzí, Ezigbo atụrụ atụrụ na-amị amị l Wool long: 1.2cm ● Agba: nwa, chestnut.coffe, pink pink na agba ndị ọzọ ● Ejiji ejiji na oke mma, Nke ndị
Oge gboo suede ajị ajị anụ ntị
Mere nke ezi ịkwa osisi, suede akpụkpọ anụ bụ ma na-ekpo ọkụ na ume. aji aji na-adụ aji dị nro ma sie ike. Ezubere nke ọma ma mepụta ya, nke kachasị mma maka ọrụ n'èzí n'oge oyi ● Nkeji edemede no: EF-008 ● Ezigbo suede akpụkpọ anụ na atụrụ ajị ajị anụ ajị ajị ● Wool long: 1.2cm ● Agba: nwa, chestnut.coffe na agba ndị ọzọ ● Ọ●ụ na repels mmiri ● Ejiji ejiji na oke mma, Nke ndị
Ezigbo ihu abụọ na-akpacha ajị anụ ntị
Ejiri akwa akpụkpọ anụ zuru ezu, ma na-ekpo ọkụ ma na-eku ume. Ajị ajị atụrụ na-adị nro ma sie ike. Ezubere nke ọma ma mepụta ya, nke kachasị mma maka ọrụ n'èzí n'oge oyi ● Nkeji edemede ọ bụla: EF-007 ● nke akwa atụrụ kpamkpam ● Ajị anụ ogologo: 1.2cm ● Agba: nwa, chestnut.coffe na agba ndị ọzọ ● Ejiji ejiji na oke mma, Ndị mmadụ
Mere nke ọkwa ezi suede elu, na dara oké ọnụ atụrụ Shearling aji lining.suede akpụkpọ anụ bụ ma na-ekpo ọkụ na ume. Ajị ajị atụrụ na-adị nro ma sie ike. Ezubere nke ọma ma mepụta ya, nke kachasị mma maka ọrụ n'èzí n'oge oyi ● Nkeji edemede no: EF-006 ● Grad ezigbo suede n'èzí ● dara oké ọnụ atụrụ shearling aji lining ● Wool long: 1.6cm ● Agba: nwa, chestnut.coffe, isi awọ na agba ndị ọzọ ... Ejiji ejiji na oke mma, Nke ndị
nkecha ezigbo akpacha ajị ajị anụ ahụ na-acha mma
Mere nke dara oké ọnụ atụrụ na-akpacha ajị na-akpa na-akpa owu. Ajị ajị atụrụ na-adị nro ma sie ike. Ezubere nke ọma ma mepụta ya, nke kachasị mma maka ọrụ n'èzí n'oge oyi ● Nkeji edemede ọ bụla: EF-003 ● Knitting ajị anụ n'èzí ● Okomoko atụrụ ajị ajị ajị anụ ● Wool long: 1.6cm ● Agba: nwa, chestnut.grey na agba ndị ọzọ ● Ejiji ejiji na akwa dabara, Ndị size
nkecha ezigbo ajị atụrụ ajị anụ ntị
Mere nke kasị mma ọkwa ezigbo suede zuru dara oké ọnụ atụrụ shearling.suede akpụkpọ anụ bụ ma na-ekpo ọkụ na ume. Ajị ajị atụrụ na-adị nro ma sie ike. Ezubere nke ọma ma mepụta ya, kachasị mma maka mmemme n'èzí n'oge oyi ● Nkeji edemede no: EF-003 ● Njirimara sequins nkọwa u Ezigbo suede mpụga, Okomoko atụrụ shearling lining ool Wool long: 1.6cm ● Agba: nwa, chestnut.coffe, isi awọ pink na agba ndị ọzọ ● Ejiji ejiji na oke mma, Nke ndị
ajị anụ ajị ajị atụrụ insole
Emere site na 100% ezigbo lambskin wichih dị oke ọkụ ma na-adịgide adịgide mana eriri eke na-eme ka ogwe aka ndị a nwee ume. na ajị anụ dị nro ma na-agbanwe agbanwe. na-eme dị ka thermostat nke anụ ahụ. Nkeji edemede dịghị: SI-002 100% Lambskin ajị na ajị anụ chere na-akwado ajị ogologo bụ ihe dị ka 10-16mm .. nwere ike belata ya nha dabara